La Xisaabtanka Shirkadaha | Martech Zone
Waxaan kula wadaagi karaa sheekooyin naxdin leh oo aad u fiican taariikhdayda bangiyada iyo kaararka deynta. Qaar ka mid ah ayaa qirtay in aan qaladka lahaa laakiin intooda badan waa ficillada qosolka leh ee bangiyada. Waxaan la yaabanahay sida raggani u seexdaan habeenkii… macaash aad u badan, lacag-bixinno, gunnooyin fulineed iyo khidmadaha xad dhaafka ah ee qosolka leh xitaa uma aysan dhiirigelin inay horumariyaan nidaamkooda.
Waa kan tusaale fiican… kaarka deynta ganacsiga waxa la damiyay laba jeer markii aan safrayay. Labada safar ka hor, waxaan bangiga ku wargaliyay in aan safri doono iyo si aan u hubiyo in aan calamad la iga saarin. Wicitaanadu waxay ahaayeen wakhti lumis - laba jeer ayaa la i xidhay waxqabad shaki leh. Laba jeer ayaa igu filan… iyo nidaamka online-ka ah ee qadiimiga ah iyo taageero la'aanta maalmaha fasaxa iyo habeenada ayaa ugu dambeyntii igu kaliftay inaan ku laabto bangi weyn. Waxaan ugu yeeri doonaa JP.
JP wuxuu leeyahay nidaam online ah oo qurux badan. JP wuxuu leeyahay awoodaha siligga shisheeye. JP waxa ay leedahay app ah oo aan ku shubi karo jeeg aniga oo sawir ka qaadaya. JP xitaa waxa uu leeyahay awooda mushahar bixinta akoonkayga. Waxaa laga yaabaa in wax qabow… JP ayaa ii magacaabay bangi gaar ah. Waa maxay bangiga gaarka ah? Waa qof ay tahay inaan iimayl u diro oo aan waco mar kasta oo ay dhibaato i haysato. Bankigeyga gaarka ah ayaa markaa ii sheega lambarka 1-800 si aan u waco caawimaad. Horumar balaadhan oo laga sameeyay nidaamkii hore ee ahaa inaad wacdo lambarka 1-800 marka hore. [Haa, taasi waa sarbeeb]
BTW: Bankigeyga gaarka ah waa qalbi macaan, waxaana ogahay inay isku dayeyso inay i caawiso intii karaankeeda ah. Ma xalliso dhibaatada, in kastoo.
Toddobaadkan dhammaadkiisa, waxaan u baahday inaan dalbado tikidhada duulimaadyada ee loogu talagalay Wadahadal shir ee San Francisco dhamaadka bishan. Marka hore waxaan isticmaalay Kayak iyo kaarka deynta ayaa guuldareystay. Marka xigta waxaan isticmaalay goobta Delta.com wayna guuldareysatay. Labada jeerba waxay sheegtay in ciwaankaygu aanu ku habboonayn akoonkayga. Dhibka kaliya ee taas leeyahay waa ciwaankayga si isku mid ah ayaa loo galaa labada gooboodba si aanu run ahaantii farqi u jirin. Halkii aan telefoonka iska dhigi lahaa, waxaan istaagay hakin inta wakiilka Delta uu shakhsi ahaan wacay bangigayga si uu u xaqiijiyo ciwaanka. (Wax ka fiican Delta!)
Wakiilka Delta ayaa soo noqday oo ii sheegay in bangigu u sheegay ciwaankaygii aan bixiyay ma waafaqsana. Hadda waan xanaaqay. Safka xiga waa aniga shaqsi bangi. Bangigeyga shaqsiyeed wuxuu laxiriiraa taageero farsamo waxayna igula talinayaan inaan iskudayo cinwaankayga Zip4 ama koodhka lambarkeyga. Dhab ahaan.
Goobta Delta ma ogola in la kordhiyo Zip4, markaa wakhtiga lumay inta u dhaxaysa iimaylka iyo wicitaanada bangigayga gaarka ah ee kooxda taageerada waxay ahayd dhaqid. Waxaan la socodsiiyay bangigeyga gaarka ah in uusan wali shaqaynayn. Afar maalmood ka dib, tigidhada ma haysto.
Halkaa marka ay marayso waxa laga yaabaa in aad la yaabto sababta aanan mid ka mid ah kaadhadhkayga kale u soo qaadan oo aan u bixiyo tigidhka. Waa maxay sababtu? Sababtoo ah tani waa inay shaqeyso. Tani waa waxa kaadhka deynta ganacsigu u yahay… samaynta waxyaabaha ay ka midka yihiin ballansashada safarka, iibsashada qalabka, iwm. I do Hayso siyaabo kale oo aad ku iibsan karto tigidhada waxaanan hubaa in dadka intooda badan ay fashiliyeen nidaamka oo ay sameeyeen taas.
Laakiin ma aadi doono.
Dhammaanteen waxaan si daacad ah ugu dulqaadanay habab badan oo nolosheenna ah. Waxaan u dulqaadanay khaladaadka software-ka, arrimaha bangiga, arrimaha telefoonka, arrimaha internetka… nolosheena kuma fududa waxyaalahan oo dhan, way sii adkaanaysaa. Marka aynu ku darno kakanaanta badan, waxaan helnaa dhibaatooyin badan. Dhammaan dhibaatooyinkan oo dhan waxa udub dhexaad u ah in aanu filanay xalin iyo in aan la xisaabtamin shirkadaha. Way sahlan tahay inaad qaadato kaadhka deynta kale intii aad sii waci lahayd oo iimaylka ugu diri lahayd bangigayga gaarka ah.
Laakiin berrito waxaan lumin doonaa wax soo saar badan oo taleefoonka ah gudaha iyo iimaylkayga shaqsi bangi. Wax-soo-saarkeedu waa (nasiib darro) waa la dhibi doonaa, sidoo kale kooxda tignoolajiyada ee ay la shaqaynayso. Waxaan hubin doonaa in tani la saxo - si dadka kale aysan u marin waxa aan ku jiro.
Haddii aan dhammaanteen la xisaabtano shirkadaha, waan sii wadi doonnaa horumarinta waxaana dhammaanteen ka faa'iideysan doonnaa.
Tags: xisaabtanbangiyadashirkadahacredit cardwax soo saarka